Bido na Wondershare Data Recovery
Echefuola File Iweghachite
Raw File Iweghachite
Naghachi Data si Devices
Flash Drive Iweghachite
Digital Igwefoto Iweghachite
Mobile Phone Iweghachite
Mpụga ike mbanye Iweghachite
Wondershare Data mgbake ngwá ọrụ na-ahapụ gị agbake ehichapụ, furu efu, ma ọ bụ formatted data na kọmputa gị na mbughari nchekwa ngwaọrụ. Ọ bụ oru oma mfe na ngwa ngwa.
Ị nwere ike ibudata Wondershare data mgbake ngwá ọrụ na-ekpe ikpe version ma ọ bụ zụta zuru version ikpe version nwere na-esonụ na-agaghị emeli:
Ị nwere ike naghachi 100,00 MB data maka free ke ikpe version,
Ọ bụ ezie na ị pụrụ ịchọ furu efu ihe ma i nwere ike naghachi naanị 100 MB nke ngụkọta furu efu data.
Full Version na uru:
Ịnwere ike ibudata na zụrụ Wondershare data mgbake ngwá ọrụ si ukara website, zuru version eso uru.
Zuru version-ahapụ gị naghachi-akparaghị ókè data.
Ị nwere ike naghachi multiple faịlụ site na iji ụghalaahia software.
Wondershare Data Recovery - Naghachi gị data n'enweghị & kpamkpam
Naghachi faịlụ na 550+ formats site na kọmputa gị nchekwa ngwa ngwa, n'enweghị nsogbu na kpamkpam
Ọzọ: Ọkachamara Mode